हेर्नुहोस् तोलाको कति छ सुनको मूल्य? – Samriddhakhabar
September 16, 2021 September 16, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on हेर्नुहोस् तोलाको कति छ सुनको मूल्य?
बिहीबार सुन प्रतितोला ९० हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको छ। आज चाँदीको मूल्य तोलाको १२ सयमा कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १७ सय ८५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।
चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँभन्दा धेरै पुग्न सक्ने।
ढुवानी खर्च मजदूर चार्ज समेत जोड्दा एक किलो चिनीमा ९५ रुपैयाँ लागत पर्न जान्छ हामीले अहिले ९५ रुपैयाँमा नै उपभोक्तालाई चिनी बेच्ने गरेका छौं त्यसैले १ सय रुपैयाँ पुर्‍याउनै पर्ने भएको छ । केही गरी सरकारले त्यो बेलासम्म पनि चिनी ल्याउन सकेन भने मूल्य त १ सय रुपैयाँ भन्दा माथि नै जान्छ,’ उनले आर्थिक अभियान दैनिकसँग भने ।यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
मानुषी लघुवित्तको आईपीओले कति पाउला ओपनिङ रेञ्ज ? यस्तो छ सम्भावना
युनियनको शेयरमा अहिले सम्म कति पर्यो आवेदन, पर्ने सम्भावना कति ?
July 10, 2021 July 10, 2021 खबर समृद्ध
लघुवित्तका आइपिओमा यति धेरै आवेदन हेर्नुहोस्।
July 4, 2021 खबर समृद्ध